विनोदको त्यो साहसलाई देखेर आज पनि सलाम ठोक्न मन लाग्छ | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार विनोदको त्यो साहसलाई देखेर आज पनि सलाम ठोक्न मन लाग्छ
विनोदको त्यो साहसलाई देखेर आज पनि सलाम ठोक्न मन लाग्छ
२०७४, १२ पुष बुधबार ०७:१७
म कुनै राजनीतिक विश्लेषक होइन । म त केवल अवसरको खोजीमा भौंतारिएर विदेशिएका ती लाखौं युवाहरुमध्येको एक हुँ । जो काँधमा देश रुपान्तरणको जिम्मा हुँदा हुँदै हजारौं सपनाहरु बोकेर बाटो लागेको एक युवक हुँ ।आज परिवार र देशको माटो छाडेर हिंडेको दश वर्ष भएछ । तर आफू जन्मे हुर्केको माटोको माया र माटोले दिएको पहिचानलाई बिर्सन सकिँदैन रै’छ । दश वर्ष अगाडि ने.वि. संघ बनेर विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका थिएँ । प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने म आज पनि कांग्रेसी हुँ भन्नुमा कुनै दुविधा छैन ।
मैंले विदेशको बाटो रोज्दै गर्दा देशमा भर्खर जनआन्दोलन सकिएर देश शाूिन्तको दिशामा अघि बढिरहेको थियो । र, म्याग्दीको जनआन्दोलन र परिवर्तनको लागि विद्यार्थी नेतृत्व गर्ने अवसरलाई सदैव अंग्रपंक्तिमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरें । मसँगै अग्रपंक्तिमा बस्न अन्य विद्यार्थी संगठनका थुप्रै मित्रहरु थिए । आज अधिकांश मित्रहरु विदेशमा पसिना बगाइरहनुभएको छ । कतिपय स्वदेशमै बसेर मेहनत गरिरहनुभएको छ । २०६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात् देशैभरि स्तम्भहरु भत्काउने लहर चल्यो । इतिहासमा त्यसको महत्व थियो वा थिएन । त्यो इतिहासकारहरुको बहसको कुरा हुन सक्छ । तर, उतिबेला हामीलाई राजतन्त्रको इतिहास र अस्तित्वको कुनै प्रवाह थिएन ।
त्यसबेला म म्याग्दी क्याम्पसको स्ववियू सभापति थिएँ । म म्याग्दीका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु एकजुट भएर राजतन्त्रको अन्त्य र भ्रष्टाचार विरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्दथें । त्यही कुरामा विश्वास राख्दथ्यो विनोद केसीले जसको कारण आज म्याग्दीको जनताले उसलाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित गराए र देशभरमै कान्छो सभासद भनेर चिनिएको छ । तत्कालीन वीरेन्द्रचोक (हाल लोकतान्त्रिक चोक)मा रहेको वीरेन्द्रको शालिक ढलाउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले निर्णय ग¥यौं र ढलायौं पनि ।
त्यो वीरेन्द्रको शालिक ढलाउँदै गर्दाको तस्वीर इन्टरनेट र छापामा भाइरल बन्यो । जसमा विनोदले फलामको गलले राजा वीरेन्द्रको टाउकोमा प्रहार गर्दै गर्दा लिइएको थियो । गृह युद्धको समयमा दाजु मदनलाई जसरी राज्य पक्षले निर्ममता पूर्वक हत्या ग¥यो र लगातार परिवारका सदस्यहरुप्रति नेपाली सेनाले कुटपिट र दुव्र्यवहार गरे त्यसको पीडा हामीलाई भन्दा लाखौं गुणा विनोद र उसको परिवारलाई थियो ।
आज सम्झँदा लाग्छ, उसले ती सम्पूर्ण पीडा, रिस, राग र बदलाको भावना त्यही शालिकसँगै अन्त्यष्टि ग¥यो । त्यसैले त कति शालीन र धैर्य छ । नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारले कसरी किलो गाडेर बसेको रहेछ भन्ने हामीलाई त्यतिबेला थाहा भयो । जब २०६३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका तत्कालीन प्र.जि.अ., सहायक प्र.जि.अ. र कर्मचारीहरुलाई हामीले रङ्गेहात पक्रियौं र जिल्ला निकाला ग¥यौं । जहाँ भ्रष्टाचारको रकमलाई प्रतिशतको आधारमा कर्मचारीहरु बीच भागबण्डा गरिन्थ्यो । उक्त घटनालाई जसरी गोप्य छानविन गरी कारवाही गर्नेसम्मको साहस र जिम्मेवारी लिने अग्रपंक्तिमा विनोद थियो । भ्रष्टाचारको विरुद्ध कानेखुशी गर्नेहरु धेरै छन् तर त्यसको विरुद्ध निडर भएर बोल्न सक्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यक्तिहरु कमै छन् । विनोदको त्यो साहसलाई देखेर आज पनि सलाम ठोक्न मन लाग्छ ।
हिजो विदेश जाने चक्करमा धेरै असफलता भोगेपछि देशमै बसेर केही गर्ने सोच बनाएको विनोदलाई मेरो विदेश जाउँ भन्ने प्रस्तावले बदल्न सकेन । यही माटोमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिएको व्यक्तिलाई मैंले जोड पनि गरिन । मेरो अमेरिकाको भिसा लागेपछि मलाई रोक्न आग्रह गर्ने व्यक्तिहरु कमै थिए । मेरो मानसपटलमा अझै पनि झलझली आइरहन्छ तत्कालीन नेकपा माओवादी जिल्ला इून्चार्ज तथा हाल पूर्व सभासद गोविन्द पौडेलले मेरो हात समाएर म जस्ता युवाहरु यो देमा खाँचो रहेकोले विदेश नलाग्न बिन्ती गरेको क्षण । तर त्यसबेला मसँग आफ्नो व्यक्तिगत सपना पूरा गर्नको निमित्त विदेश लाग्नु बाहेक अरु विकल्प देखिन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिर हामी तीनजना अत्यन्त मिलनसार मित्रहरुलाई बिदाई गर्दै गर्दा विनोदसँग सँगै हामी सबैका गहभरी आँसु र मन भारी थियो । हामीमा देश छाडेर विदेश लाग्नुको पीडा त छँदै थियो । हामीलाई लाग्यो हामीले विनोदलाई एक्लै छाड्यौं । तर हामी गलत थियौं । उसले हामीलाई एक्लो भएको महसुस हुन दिएन र निरन्तर आफ्नो यात्रा जारी राख्यो । विदेशमा लामो समय बसे पनि जिल्ला र देश कुनै पनि कुरा टाढा रहन सकिएन र सकिँदैन पनि । ऊ हामीबाट बारम्बार देशमा आर्थिक लगानी गर भनी घच्घच्याइ रहन्थ्यो । नयाँ योजनाका कुराहरु सुनाइरहन्थ्यो ।
प्रदेश सभाको चुनावमा विनोदले माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाउने समाचार बेनीअनलाइन, फेसबुकको भित्ताहरुमा पढेपछि थाहा पाएँ । जीवनमा त्यति धेरै खुशी कमै लागेको छ । हामी विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरु अत्यन्त उत्साही थियौं । हामीले उसले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीलाई हेरेनौं न त पार्टीहरुको गठबन्धनलाई ऊ त हामी जस्ता युवाहरुको प्रतिनिधि थियो । त्यसैले त विनोदलाई निर्वाचित गराउन विदेशमा रहेका मित्रहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ग¥यौं । मलाई वामगठबन्धनप्रति कुनै गुनासो थिएन तर लोकतान्त्रिक गठबन्धन देखेर वितृष्णा लागेर आयो ।
लाग्यो हतारमा कांग्रेसले आफ्नो मर्यादा र इतिहास बिर्सेछ । राजतन्त्र, पञ्चायती र अवसरवादीहरु विरुद्ध यति लामो लडाईं लडेर यहाँसम्म आईपुग्दा फेरी तिनीहरुलाई उनै बोकेर जनताको घरदैलोमा भोट माग्न पुग्ने झुण्डहरु देखेर वाक्क लाग्यो । खैर, चुनावपछिको परिणाम देखेर भने साँच्चै हामी जस्ता विदेशमा बसेर स्वदेशलाई माया गर्ने र साँच्चिकै परिवर्तन चाहने लाखौं युवाहरुलाई उत्साही बनाएको छ ।
नेपाली जनताको सोचमा परिवर्तन आएको छ र स्थिर राजनीति चाहन्छन् भन्ने कुराको विश्वास बढेको छ । परिवर्तन नयाँ नेपालको नारामा मात्र होइन । साँच्चिकै विकास चाहन्छन् भन्ने महसुस भएको छ ।कानून लेख्ने, परिवर्तन गर्ने र लागू गर्ने प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन र यो चलिरहन्छ । तर पछिल्लो समयको प्राप्ति संविधान, स्थानीय, संघीय र राष्ट्रियसभाको चुनावको सफलताले देशको नक्सामात्रै कोरिरहने युगको अन्त्य गरेको छ । निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई दिएको स्पष्ट बहुमतले पनि जनता अब स्थिर सरकार र विकास चाहन्छ भन्ने पूरा पुष्टि भएको छ । जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।
हाम्रा आमा, बुबा र आफन्तहरु आफ्ना विदेशिएका सन्तानहरु त्यहाँ विदेशका चिल्ला बाटोमा गाडी चढ्छन्, अग्ला भवनमा बस्छन् । सुखमय जीवन यापन गरिरहेका छन् र स्वदेशमा धुलो, धुँवा खान फर्कंदैनन् भन्नेमा विश्वास राख्दछन् । कतिपय हकमा यो सत्य पनि छ । तर म जस्तै अन्य कैयौं युवाहरु जो स्वदेशमा फर्केर व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी गरी सामान्य जीवन यापन गर्न चाहन्छन् । जो आफ्नो परिवारको सुरक्षा र सन्तानको उज्वल भविष्यको चिन्ता गर्दछन् ।
सबै युवाहरु विदेशको सुख सुविधामा लालायित छन् भन्ने भनाई गलत छ । युवाहरु केवल देशको परिस्थिति देखेर अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । धुँवा, धुलो युवाहरुको बाधक होइन, बाधक त हाम्रो सोच र उचित वातावरण नहुनु हो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली नहुनु हो । युवालाई स्वदेशमा प्राथमिकता नदिएर विदेशको बाटो देखाउनु हो । बाधक त श्रम मन्त्रालय हो, जो देशभित्र श्रमको अवसर सिर्जना गर्नुको साटो वैदेशिक रोजगार विभाग खोलेर विदेशमा रोजगारीको अवसरको प्रचार गरेर बसेको छ ।
आज विनोद जस्ता युवाहरुले राजनीतिमा पाएको अवसरले हामी विदेशमा रहेका युवाहरुलाई आशाको दियो जलाएको छ । जसले हाम्रो भावना र भावी योजनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । आशा छ, आज विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरु जो स्वदेश फर्कने जहाजको निम्ति टिकट लिन तत्पर छन् उनीहरुका आशा भरोसाहरुलाई कुल्चिने छैन । अन्ततः राष्ट्रलाई कठिन बाटोमा पनि दोहो¥याएर यहाँसम्म ल्याई पु¥याउने सम्पूर्ण नेताहरु, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गराउनुहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, संघीय चुनाव सम्पन्न गराउनुहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दछु र भावी प्रधानमन्त्री र सरकारलाई शुभकामना प्रकट गर्दछु । हाल अमेरिकामा रहेका लेखेक म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सभापति हुन् ।
Previous articleबेनी सामुदायिकको लोभलाग्दो प्रगतिले शैक्षिक भ्रमणको लर्को
Next articleआगोलागी पीडितलाई बेगखोला कल्याणकारी समाजको सहयोग